Otu esi etinye ihe nchọgharị Microsoft Edge na openSUSE Leap 15 - LinuxCapable
November 13, 2021 by Jọshụa James
Mepụta & Bubata Microsoft Edge Repository
Nhọrọ. Wụnye Microsoft Edge Browser Beta ma ọ bụ Dev Version
openSUSE ndị ọrụ ugbu a, na ndabara, bụ naanị na ndị Ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ otu ụzọ ọzọ nke na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux yana ikekwe ọzọ ma e jiri ya tụnyere naanị ịgbanwe gaa na. Google Chrome.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Microsoft Edge na openSUSE 15 Leap.
Site na ndabara, Microsoft Edge anaghị esonye na ebe nchekwa openSUSE. Agbanyeghị, ịnwere ike ibubata ebe nchekwa gọọmentị na sistemụ gị ngwa ngwa site na iji usoro a.
Nke mbụ, bubata ebe nchekwa Edge site na iji iwu a.
Site na nhazi ebe a na-edebe ebe nchekwa, ị ga-emerịrị ndepụta isi mmalite njikwa ngwugwu zypper gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ tupu echichi Edge. Iji mee nke a, gbanye iwu a na njedebe gị:
Ugbu a wụnye Edge na iwu a:
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike iwunye Microsoft Edge Brower beta ma ọ bụ dev (n'abalị) na-ewu ma ọ bụrụ na ị budatala ebe nchekwa. A naghị atụ aro ụdị abụọ a maka ojiji kwa ụbọchị, ọkachasị ọ bụghị na desktọpụ isi ma ọ bụ ihe nkesa mmepụta. Otú ọ dị, maka ndị chọrọ ibi na nsọtụ, ị nwere ike ịwụnye nsụgharị ndị ọzọ.
Ịdọ aka ná ntị - Ụdịdị ndị a nwere ike ịnwe ntụpọ nchekwa mgbe a na-anwale.
Ejila ihe ndị a ma ọ bụrụ na ị nweghị ike ịkwado ihe ize ndụ ahụ.
Iji wụnye Microsoft Edge Browser Beta:
Iji wụnye Microsoft Edge Browser Dev (abalị):
Iji nyochaa Microsoft Edge Browser Beta:
Iji nyochaa Microsoft Edge Browser Dev (abalị):
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe > Gosi ngwa > Microsoft Edge. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu ngwa.
E mechaa, ị ga-ahụ nhọrọ atọ Mkpali, Ozi or Chebara ya echiche. Ịhọrọ taabụ ọ bụla ga-elele ihe nlele ga-adị na ndabere ihe nchọgharị Edge gị.
Họrọ otu wee pịa ya bọtịnụ nkwenye.
Ọmụmaatụ iji lekwasịrị anya maka UI dị mfe:
Ekele, ị tinyela Microsoft Edge.
Ka imelite ihe nchọgharị Internetntanetị Microsoft Edge, mee ya iwu ume ọhụrụ zypper na ọdụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla.
Ọ bụrụ na otu dị, ọ ga-emelite onwe ya.
Iji wepu Edge, mebie iwu ọnụ ọnụ:
Iji wepu Microsoft Edge Beta:
Iji wepu Microsoft Edge Dev:
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi ebubata ngwungwu ọnụọgụ abụọ zypper yana igodo GPG iji wụnye Microsoft Edge.
N'ozuzu, Microsoft Edge bụ nhọrọ siri ike. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-emepe emepe na ndị na-akwado FOSS agaghị enwe ihe mgbochi ya n'ihi iji ngwaahịa Windows na akụkọ ihe mere eme na Linux, na ogologo akụkọ ihe mere eme nke Microsoft vs. Linux, ụfọdụ n'ime ya bụ ihe ziri ezi n'ezie ọ bụ, ụfọdụ n'ime ya. ọ bụ naanị ihe mkpofu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Agbanyeghị, ogo Edge maka arụmọrụ na ala ọsọ na-agbada nke a n'etiti ihe nchọgharị ịntanetị kachasị elu, ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma na Linux. Ọ bụrụ na ị nwere ike imeri eziokwu ahụ, Microsoft nwere ya.
Categories openSUSE Tags Microsoft Edge Nchọgharị, megheSUSE Leap 15 Mail igodo
Otu esi etinye Desktọpụ Xfce na Rocky Linux 8